ဆက်စတန့်အင်္သာတိုင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
ဆက်စတန့်အင်္သာတိုင်း (အင်္ဂလိပ်: Sextant) သည် မိုးကုပ်စက်ဝိုင်း၏အထက်ရှိ နေ ၊ လ ၊ နက္ခတ်တာရာတို့၏ အန်ဂူလာ အကွာကိုတိုင်းတာသော ကိရိယာဖြစ်သည်။ ထိုကိရိယာကို ခရစ်နှစ် ၁၇၃ဝ ပြည့်နှစ်လောက်တွင် ဖိလဒဲလဖီးယားမြို့သား သောမတ် ဂေါ့ဖရီ ဆိုသူသည်၎င်း၊ ဗြိတိသျှ ရေ တပ်မတော်သား ကက်ပတိန် ဟက်ဒလေ ဆိုသူသည်၎င်း အသီးသီး မိမိတို့ဘာသာ တစ်ခြားစီ တီထွင်ခဲ့ကြလေသည်။
ပုံ-(၁)?[ရှင်းလင်းချက်လိုအပ်သည်။]ကို လေ့လာလျှင် ဆက်စတန့် ကိရိယာဖြင့် အန်ဂူလာ အကွာကို မည်သို့တိုင်းရသည်ဟူသော မူကို သိမြင်နိုင်သည်။ (စ) သည် ရိုးရိုး ကြည့်မှန်တစ်ချပ်ဖြစ်သည်။ ထိုကြည့်မှန်၏ မျက်နှာကို အောက်ဘက်သို့ စောင်းထားပြီးလျှင်၊ လက်ဝဲဘက်သို့လည်း လှည့်ထားသည်။ (ဆ) သည်ကား ဟင်းသပြဒါး သုတ်မထားသော ရိုးရိုးမှန်တစ်ချပ်ဖြစ်၏။ (မ) အမှတ်အသားတွင် မျက်စိကိုထားလျက် ထိုမှန်ကို ကြည့်သော် အဝေးမှအရာဝတ္ထုကို (ည) အမှတ်ဆီ၌ မျဉ်းစက်များအတိုင်း မြင်ရသည်။ အခြားအရာ ဝတ္ထု (အ) သို့မဟုတ် (ပ) မှလာသည့် အလင်းရောင်သည် ချိန်ထားသောကြည့်မှန် (စ) ကို ရိုက်ပြီးနောက်၊ (စဆ) မျဉ်းအတိုင်း ရောင်ပြန်လျက် မှန်ပြား (ဆ) ပေါ်သို့ကျရောက်သည်။ ထိုအလင်းရောင် တစ်ဝက်တစ်ပျက်သည် (ဆမ) လမ်းကြောင်းအတိုင်း မှန်ပြား (ဆ) မှ ရောင်ပြန်ရိုက်လာ၏။ ထို့ကြောင့် (မ)အမှတ်မှ ကြည့်သူသည် (ည) နှင့် (အ) ဝတ္ထုနှစ်ခုကိုသော်၎င်း၊ (ည) နှင့် (ပ) ဝတ္ထုနှစ်ခုကိုသော်လည်းကောင်း တထပ်တည်းမြင်ရသည်။ ပုံတွင်ပါသကဲ့သို့ ကြည့်မှန် (စ) ကို မှန်ပြား (ဆ) နှင့် မျဉ်းပြိုင်ထားလျှင် (ညမ) နှင့် (အစ) လင်းတန်းများသည် ပြိုင်နေကြသောကြောင့် ယင်းတို့ကို အဝေးရှိ ဝတ္ထုတစ်ခုတည်းမှလာသော အလင်းတန်းများကဲ့သို့ ယူဆနိုင်ပေသည်။ ကြည့်မှန်ထဲတွင် ပုံရိပ်နှစ်ခုကို တစ်ခုတည်းကဲ့သို့ မြင်ရသည်။ သို့ရာတွင် (ကခ) မျဉ်းစက်အတိုင်း အဆိုပါကြည့်မှန် (စ)ကို အနည်းငယ်စောင်းလိုက်ပါမူ (ပ) မှလာသော အလင်းတန်းသည်၎င်း၊ မှန်ပြား (ဆ)ပေါ်သို့ရောင်ပြန်သော အလင်းတန်းသည်၎င်း ကြည့်မှန် စောင်းသွားသော ထောင့်၏ နှစ်ဆဖြင့် (အစ) လမ်းကြောင်းမှ စောင်းသွားသည်။ ဤသို့ နှစ်ဆတိုးစောင်းခြင်းအကြောင်းမှာ ကြည့်မှန် (စ) ရွေ့ရှားသဖြင့် လင်းရိုင်ထောင့်၊ လင်းပြန်ထောင့်များ ပြောင်းလဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကြည့်မှန် (စ) နှင့် မှန်ပြား (ဆ) တို့ကြားရှိ ထောင့်ကို တိုင်းယူနိုင်လျှင် ထိုထောင့်ကို နှစ်ဆတိုးလိုက်ခြင်းအားဖြင့် (ည) နှင့် (ပ) တို့မှလာသော လင်းတန်းတို့၏ကြားရှိ ထောင့်ကို သိနိုင်ပေသည်။ ဆက်စတန့် အင်္သာတိုင်းသည် အဆိုပါ မှန်နှစ်ချပ်ကြားရှိ ထောင့်ကို တိုင်းသည်။
ဆက်စတန့်ကို အသုံးပြု၍ မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းမှ အထက်တွင်ရှိသော နေ၏ အမြင့် အကွာအဝေးအား တိုင်းတာပုံ
ထိုကိရိယာ၏ အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းများကို ပုံ-(၂)?[ရှင်းလင်းချက်လိုအပ်သည်။]တွင် ပြထားသည်။ (ကခဂ) အစိတ်အပိုင်းတွင် (ဂ) ကို ဗဟိုပြုသည့် (ကခ) စက်ဝန်းပိုင်းတစ်ခုရှိ၍ (ဂခ)၊ (ဂက) အချင်းဝက်ပေါင်တန်းများကို အခြေခံပေါင်၌ အသေတပ်ထားသည်။ အခြေခံပေါင်ကို ပုံတွင် မဖော်ပြပေ။ ထိုအခြေခံပေါင်တွင် (ဆ) မှန်ချပ်ကိုလည်း အသေတပ်ထားသည်။ ထိုမှန်၏ အထက်ကို ပြဒါးသုတ်ထား၏။ အောက်တခြမ်းမှာမူ အလင်းရောင်ပေါက်သော မှန်ရိုးရိုးဖြစ်သည်။ ယင်းမှန်ကို လင်းပေါက်မှန်ဟု သိပ္ပံပညာအရခေါ်ဆိုကြသည်။ (တ)သည် ပေါင်ပေါ်၌ အသေတပ်ထားသော တယ်လီစကုပ်(အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်း) ဖြစ်၏။ (မ) အမှတ်၌ မျက်စိထား ကြည့်လျှင် ကြည့်မှန်၏ လင်းပေါက်အခြမ်းကို ဖြတ်လျက် အဝေးမှအရာဝတ္ထုကို မြင်နိုင်သည်။ တစ်ချိန်တည်း၌ပင် ပြဒါးသုတ်မှန်တခြမ်းမှ ပြန်ဟပ်သည့်အလင်းရောင်ဖြင့် အခြားအရာဝတ္ထုကိုလည်းမြင်နိုင် သေးသည်။ စက်ဝန်းပိုင်း (ကခ)ပေါ်တွင် ပုံ၌ပြထားသည့် အစိတ်အပိုင်းများပြုလုပ်ထား၏။ ထောင့်ကို နှစ်ဆ တိုးရသဖြင့် စက်ဝန်းပိုင်း (စက)တွင်ရှိ အတိုင်းအတာတို့ကိုလည်း နှစ်ဆ တိုးထားသည်။ ဆိုလိုရင်းမှာ ဤစက်ဝန်းပိုင်းသည် အလျား ဒီဂရီ ၆ဝ မျှသာရှိသော်လည်း ကြည့်ရှုသည့်အရာဝတ္ထု၏ အန်ဂူလာ အကွာ အမှန်ကို သိမြင်နိုင်ရန် ဒီဂရီ ၁၂ဝ အထိ စိတ်ထားသည်။ (ပဘ)သည် လက်တံရှင်ဖြစ်သည်။ ယင်း၏ အထက်စွန်းတွင် အညွှန်းပြ မှန်ခေါ် ကြေးမုံ (ဂ)ကို ထောင့်မတ်ကျတပ်ထားသည်။ ထိုလက်တံသည် (ဂ) ကို ဗဟိုပြု၍ လှည့်သည်။ လက်တံ အောက်စွန်းတွင် အညွှန်းပြကွက်နှင့် ဗာနီယာ တစ်ခုပါရှိရာ၊ လက်တံ၏နေရာကို စက်ဝန်းပိုင်းရှိ အမှတ်အသားများအရ သိနိုင်ပေသည်။
(ဂ) ၌ဖြစ်သော တာရာတစ်လုံး၏ အန်ဂူလာအကွာကို တိုင်းလိုသောအခါ ဆက်စတန့်ကို လက်တွင် ထောင်လိုက်ကိုင်၍ တယ်လီစကုပ် (တမ) ကို ရေပြင်ညီရှိစေရသည်။ ကြည့်သူသည် ထိုတာရာနှင့် မျက်နှာချင်း တည့်တည့်ဆိုင်ပြီးလျှင် တာရာကို တယ်လီစကုပ်မှ မြင်ရသည့်တိုင်အောင် လက်တံ (ပဘ) ကို ရွေ့ပေးရသည်။ တာရာသည် ရေပြင်နှင့် တထပ် တည်းကျသောအခါ လက်တံ (ပဘ) ရွေ့ပေးရသောထောင့်ကို သိနိုင်ပြီ။ ထိုထောင့်တွင့် ဒီဂရီ မည်မျှရှိသည်ကို လက်တံစွန်းရှိ အညွှန်းပြကွက်၌ပေါ်သော အမှတ်အသားကို ဗာနီယာဖြင့် ကြည့်၍သိရသည်။
↑ မြန်မာနိုင်ငံဘာသာပြန်စာပေအသင်း (၁၉၆၀)။ "ဆက်စတန့်အင်္သာတိုင်း"။ in မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း စာတည်းအဖွဲ့ (ed.)။ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း။ ၄ (ပဌမအကြိမ် ed.)။ ဟေဇယ်ဝပ်ဆင်ဗိုင်းနေးလီမီတက်ပုံနှိပ်တိုက်၊ အင်္ဂလန်: စာပေဗိမာန်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဆက်စတန့်အင်္သာတိုင်း&oldid=743876" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၈ မေ ၂၀၂၂၊ ၀၂:၀၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။